La kulan ardayga tooska ah ee CECI College Gabby! - Koleejooyinka Hore ee Colorado
Bogga ugu weyn / CEC Castle Rock / La kulan ardayga tooska ah ee CECI College Gabby!
June 10, 2021August 13, 2021Maryan Bain
CEC Inverness College Ardayga Tooska ah
Ujeeddo: Raadinta Shahaadada Masterka ee Sayniska Kombiyuutarka “
Barnaamijka Kuleejka Tooska ah ee CEC ayaa ii noqday mid aad iigu habboon. Wax yar ayaan ka welwelsanaa markii hore in koorsooyinka heerka kulleejku ay aad u adkaan doonaan oo aanan awoodin inaan helo A, laakiin la -taliyayaashayda CEC waxay kalsooni ku qabeen inaan qaban karo shaqada wayna saxsan yihiin. Waan jeclahay kala -duwanaanta iyo caqabadaha koorsooyinka aan awoodi karo inaan aado runtiina waxaan sugayaa inaan ka qalin -jebiyo dugsiga sare CEC anigoo gacanta ku haysta shahaadada kulliyadda! ”
La kulan CECP Grad Mya!CECI Ku noqo Qorshe Baro!